Mas’uuliyiin ka tirsan DF oo la shaaciyey inay guryahooda ku qarinayaan xubno Shabaab ah – Hornafrik Media Network
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ka hadashay xubnaha ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab iska soo dhiiba isla markaasina aan marin sharciga saxda ah ee ay ugu talo-gashay maxkamadda.
Guddomiyaha Maxamadda sare ee Ciidamada Qalabka Sida, Gen Liibaan Cali Yarow oo Maanta ku soo laabtay Muqdisho, isaga iyo Gudoomiyaha Maxkamadda Darajadda 1aad, Col Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ka hor intii uusan ka soo ambababixin Baydhabo sheegay in ay jiraan dad ka qayb qaata qarinta xubnahaasi oo is kugu jira shaqsiyaad ka tirsan masuuliyiinta Dawladda iyo qaar kale oo ehelladooda ah.
Guddoomiyuha ayaa sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in ay guryaha ku haystaan dad aan diiwan gashanayn, islamarkaasina aan marin sharcigii loogu talo galay inay maraan
Guddoomiyaha ayaa intaasi u daray in dadkaasi oo qaab qabaa’il guryahay ugu haysta oo saraakiil iyo xildhibaanno is kugu jira ay la mid yihiin Shabaabka.
Hadalkan Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ayaa kusoo beegmaya xili Shabaabkii ugu badnaa ay muddooyinkii dambe isku soo dhiibayeen dawladda Soomaaliya, iyadoona marar badan ay soo baxayeen Tuhuno ku saabsan in Alshabaab ay ku dhex milmeen Hay’adaha Dowladda.
Xog: Taliyaha Itoobiyaanka ah ee Amisom oo loo diiday inuu Kismaayo soo galo